အော်ဂဲနစ်မသန့်စင်သော Hemp Seed Oil | HelpMeHemp - HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ Hemp Seed Superfoods Organic Unrefined Hemp Seed Oil
HelpMeHemp ရဲ့® များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ရည်ညွှန်းထားသော Organic Unrefined Hemp Seed Oil သည်သဘာဝတရား၏အပြည့်အဝမျှမျှတတရှိသည့်ဆီဖြစ်သည် ဆဲလ်အသစ်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးခြင်းနှင့်အရေပြားကြီးထွားမှုကိုအားပေးခြင်းအားဖြင့်သင့်အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေသည် ဗီတာမင်များနှင့်အစိုဓာတ်ဖြည့်တင်းသောအရည်များ၊ လျှော်မျိုးစေ့ဆီသည်အရေပြားအမျိုးအစားအများစုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အရေပြားကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်းရန်နှင့်ဆီထုတ်လုပ်မှုကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ကူညီခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှော်မျိုးစေ့သည်သင့်အသားအရေကိုအာဟာရဖြစ်စေသည့်အခါခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အညစ်အကြေးများ၊ အဖုအပိန့်များ၊ HelpMEHemp's® Hemp Seed Oil သည်သင်၏အသားအရေကိုအလွယ်တကူစုပ်ယူနိုင်ပြီးအပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိဘဲသင့်ကိုအသစ်သောအသစ်တစ်ခုအတွက်သင့်အသားအရေကို detoxify လုပ်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏အသားအရေကိုမျှတစေရန်၊ ထိုရယ်မောခြင်းများကိုလျှော့ချရန်၊ အနာပျောက်စေသောရောဂါသို့မဟုတ်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအသားအရေကိုပိုမိုစုံလင်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
HelpMeHemp ၏ Organic Unrefined Hemp Seed Oil သည်အကောင်းဆုံးအာဟာရအတွက်စားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အူကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးအလွယ်တကူအစာကြေလွယ်ပြီးဟော်မုန်းများကိုမျှတစေသည်။ ၎င်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများမရှိသည့်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်၊ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုအတွက်စွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အလေ့အထကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Anti-inflammatory, Antioxidant, Antibacterial, Antiviral, Antifungal, Skin Regenerative, Neuro-Protective နှင့် Cardio-Protective attribute တွေ။
သင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြှင့် တင်၍ တစ်နေ့ဇွန်းတစ်ဇွန်းလောက်သာဖျားနာခြင်းကိုရှောင်ပါ။
အသုပ်တစ်သင်းလုံးကကစားသမား, ဝက်အူချောင်း, marinades, dips
၀ ါဖေါ့တွင် ၀ င် / ထွက်ခြင်း၊ ကြော်ခြင်း၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်၊ အမဲလိုက်၊ ကော်ဖီ၊ ဖျော်ရည်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အခြားအရသာရှိသောဟင်းလျာများကိုမွှေပေးပါ။
သစ်သားအဘို့အ arn ဆေး
ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှု, ခေါင်းလျှော်ရည်, ဆီ, အနှိပ်အဆီ
အရွယ် 17 အောင်
29 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ထင္ျမင္ခ်က္ေရးထားခဲ့ပါ။
Hemp ရေနံနေ့စဉ်သောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏နှင်းခူကိုသန့်ရှင်းစေ။ ကောင်းသောခံစားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်
အဆိုပါလျှော်မျိုးစေ့ကိုချစ်ပါ။ ၎င်းသည်မနက်ခင်း ၁ တွင်တစ်နေ့ဇွန်း ၂ ခွက်နှင့်ညနေခင်းတွင် ၁ နာကျင်မှုကင်းသောတိုက်ရိုက်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားခြင်းဖြင့်လည်းသင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအစိုဓာတ်ဖြည့်ဆေးဖြစ်သည်။
TAra ။ ။
ဆောင်းနှင့်နွေရာသီတွင်လျှော်ကြေးနှင့်အာဂန္ဓီတို့သည်ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုသက်သာစေသည်။ နံနက်တိုင်းလအနည်းငယ်အတွက်လျှော်ရေနံဇွန်းရှိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်ပင်းနာခြင်းနှင့်နာကျင်မှုနည်းသည်။ ငါသည်လည်းငါ့သုပ်နှင့်ဖျော်ရည်အတွက်လျှော်အစေ့ကိုချစ်! သင်၏စင်ကြယ်သောလတ်ဆတ်သောအသက်ပေးသည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Help Me Hemp ထုတ်ကုန်များကိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်ပါသည်။ အဆိုပါလျှော်ရေနံသည်ကျွန်ုပ်၏ခင်ပွန်းအား Cystic Acne နှင့်ကူညီသည်။ သူသည်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်သောက်လေ့ရှိပြီးထိုဒေသများတွင် ZERO ထွက်ခဲ့သည်။ ဆေးညွှန်းဆေးများသည်လျှော်ရေနံကဲ့သို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကျွန်တော့်သားက၎င်းကိုနောက်ကျောတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။ ငါ့ဆံပင်ပေါ်မှာ Argan ဆီသုံးတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကတောက်ပပြီးပျော့ပျောင်းစေတယ်။ Lime Body Butter သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးအနံ့အလွန်ကောင်းသည် !! ကျန်းမာသောအာဟာရများတိုးပွားစေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏နံနက်ပရိုတိန်းကိုလှုပ်ခါသည်သစ်သီးစေ့ကိုထည့်သည်။ Help Me Hemp မှကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
hidradenitis suppurativa၊ ငါခံစားနေသည့်အရေပြားအခြေအနေမှငါ့ရင်ဘတ်ပေါ်၌ရှိသောအဖုတခုခုကိုစမ်းကြည့်ဖို့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါ့ကိုပို့လိုက်သည်။ အဆိုပါလျှော်ရေနံခေတ်မီဆေးပညာရုံမထိဘဲလမ်းအတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ငါ့အသားအရေဟာဘယ်တော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်လျှော်ရေနံကအနာကိုပိတ်လိုက်ပြီးစိမ်းကစုတ်လာပြီးဆက်ကျလာတယ်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏မျက်နှာနှင့်နေလောင်ခြင်းများတွင်စိုစွတ်စေသောအရာအဖြစ်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယလုံးဝအလွပါ!
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာကျွန်တော့်ရဲ့သားအိမ် fibroids ကိုသိလိုက်ရတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီပြissueနာကိုငါဖြေရှင်းဖို့ hysterectomy ရဖို့အကြံပေးတယ်။ နှစ် ၃-၄ ပတ်ကြာမှအလွန်လေးလံ။ နာကျင်သောရာသီလာခြင်းသံသရာရှိခဲ့သဖြင့်သွေးအားနည်းရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ခန္တာကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လကုန်မှာသတ်မှတ်ထားပေမယ့်ဇွန်းကုန်အထိနေ့တိုင်းလျှော်ရေနံတစ်ဇွန်းကိုစတင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သြဂုတ်လလယ်လောက်မှာသွေးထွက်သံယိုမှုတွေရပ်တန့်သွားပြီးအခုငါဟာတစ်နှစ်ဖြစ်နေပြီ။ ငါ Keri နှင့် Bob နှင့်သူတို့၏အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်များအတွက်အလွန်အမင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှင့်နာကျင်ကာလ၏ပြtheနာနှင့်အတူဝန်ကိုထမ်းသူမဆိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကအကြံပြုသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုဒေါ်လာ ၆၀၀၀ တန်ဘိုးပေးပြီးစုဆောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝကိုပြန်ရပြီ၊ ရှက်စရာမတော်တဆမှုတွေမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် HelpMEHemp!
ဒါကြောင့်ဒီပုံကိုကျွန်တော်အာဂွန်ဆီပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာသုံးခဲ့ပေမဲ့ဒီသုံးသပ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်ပါတယ်။ အာဂရန်ဆီကိုမမှာခင်ကျွန်တော်ရေလျှော်ဝယ်လိုက်တယ်၊ ဒီပစ္စည်းကအရေပြားပေါ်မှာအံ့သြစရာကောင်းပြီးအရမ်းအရသာရှိတယ်။ ငါကဒီအာဟာရအရသာရှိပြီးငါကစည်းကိုကြိုက်တယ်, အိပ်ရာမဝင်မီည၌ဤပစ္စည်းပစ္စယများ၏ပက်ကျိယူပြီးပါပြီ။ ဒါဟာအသုပ်အပေါ်လည်းအံ့သြဖွယ်ပါပဲ !! ဤပစ္စည်းကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ငါနံနက်ယံ၌ဇွန်းနှင့်ညအချိန်တွင်တစ်ဇွန်းယူ။ ဒီဆီဟာငါ့ဘဝမှာအကောင်းဆုံးအရာဖြစ်ပြီးမျက်နှာနှင့်အသားအရေအတွက်နာကျင်မှု၊ စိုထိုင်းမှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးပြီးသင်ဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ခံစားရသည်။ ကြိုက်တယ်
Hemp ရေနံကကျွန်တော့်မိသားစုတစ်ခုလုံးဘဝပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ညီအတွက်ရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့ရသည့်အတွက်အလွန်စိတ်စွဲမှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်နေ့စဉ်ဆိုးရွားသောတင်ပါးဆုံရိုးနာကျင်မှုခံစားခဲ့ရပြီးအမြဲတမ်းနာကျင်ကိုက်ခဲမှုခံစားခဲ့ရသည်။ ၃ ရက်တွင်သူသည် ၉၀% နီးပါးပြန်လည်နာလန်ထူနေသည်ဟုသူကပြောသည်။ သူ့တင်ပါးက ၁၀ ဆပိုကောင်းတယ်။ ကာကွယ်ဆေးဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသောကျွန်ုပ်တို့၏သားနှင့်အတူသိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ လှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းခြင်း၊ နာကျင်မှုနည်းခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်ပြီး encephalopathy လျော့နည်းစေသည်
PMS ၏လက္ခဏာများလျော့နည်းသွားခြင်းအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလုံးဝထောက်ခံချက်ဖြစ်သည်။ ငါဒီဆီကိုစသုံးပြီးကတည်းကပိုကောင်းနေခြင်း။
Michael s ။
ငါ့အသားအရေဟာပိုကောင်းတယ်။ ငါမနက်တိုင်းကော်ဖီသောက်တဲ့အခါဆီကငါအရမ်းကြောက်တယ်။ ဒါဟာငါ့အဆစ်တွေအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ခွေးများကိုသူတို့၏အဆစ်များအတွက်လည်းပေးသည်။ သူတို့ရဲ့ဆံပင်ကအရမ်းပျော့ပျောင်းတောက်ပတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုချစ်။ သူငယ်ချင်းတွေကိုမင်းအကြောင်းအမြဲပြောတယ်
ရုံဒီပစ္စည်းပစ္စယကိုချစ်။ ငါ့အသားအရေဟာပျော့ပျောင်းတာမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာ၊ လည်ပင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မရဲ့အစားအစာအပြင်အရသာအပြင်ကိုလည်းကြိုက်တယ်။ ဒါကကျွန်တော်ပထမဆုံးအကြိမ်အသုံးပြုတာပါ။ အခုချိန်မှာမရှိတာကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားနိုင်တော့ပါဘူး။ ငါဒီရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်!
ဒီဆီကိုငါကြိုက်တယ် ငါမရှိရင်ဖြစ်ချင်တယ်။ ငါတစ်နေ့လျှင်2ဇွန်းနဲ့နာကျင်မှုအခမဲ့အသက်ရှင်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏မျက်နှာနှင့်အသားအရေအတွက်အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးသည့်အရာအဖြစ်လည်းသုံးပါသည်။ ငါဒီနှစ်အသက် ၆၃ နှစ်ရှိလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ Helpmehemp ဟာအံ့သြစရာကောင်းတယ်။
အနှိပ်အဆီများအနှိပ်ခံခြင်း၊ ငါ့ကိုယ်၌အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏။ အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤဆီသည်ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းချက်များကိုဖြေကြားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ပြင်းထန်သောဓာတ်မတည့်မှုခံစားနေရသောဆရာဝန်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆရာဝန်ကိုတောင်မှရောဂါရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ငါခွဲထွက်သောအခါပျားကိုက်ခြင်းနှင့်တူသောခံစားမှုများပြားသောကိုယ်ခန္ဓာတစ်လျှောက်လုံးရှိကြီးမားသောအသင်းအဖွဲ့ချုပ်ကိုရရှိသည်။ ။ ဒါကနာရီနဲ့ချီဖြစ်နေတယ်။ ငါ Benadryl ကိုအများကြီးယူပြီးငါ့အပေါ်မှာတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ငါစတိုးဆိုင်သို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အံ့သြဖွယ်စတိုးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလုပ်ကော်ဖီပူပြင်းတဲ့ကော်ဖီခွက်နှင့်အတူသူတို့ကိုအသေးစိတ်၏ဖော်ပြချက်နှင့်အတူကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန်အားလုံး၏ခမ်းနားခရီးစဉ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ငါဒီဆီကိုငါ့ပခုံးပေါ်တိုက်ရိုက်တင်လိုက်တယ်၊ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်နေရာပဲရှိနေပါစေ ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီ။ ဤထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်တစ်ညလျှင် ၄ နာရီကျော်အိပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်များသည်လူတို့၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများထက်သဘာဝဆေးဝါးများကိုဖွင့်ပေးနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် HelpMEHemp!
Ed က Shelpiee
အဆိပ်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုများမောပန်းခြင်းနှင့်ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်းများကကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ထိခိုက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ခန္ဓာတလျှောက်လုံးဖိစီးမှုကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ငါဒီမှာဆီဆီခွဲတမ်းတွေစဖွင့်ပေမဲ့ညဘက်မှာငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကအားနည်းနေလို့လွတ်လပ်စွာအစွန်းရောက်တွေရလာခဲ့တယ်။ အိပ်ယာမ ၀ င်ခင်ငါ့ကိုယ်ဆီကိုဆီဖြန့်လိုက်တယ် ..... ငါနိုးလာပြီးခြေထောက်ပေါ်တက်လာတဲ့အခါနေ့တစ်နေ့ကိုစတင်နိုင်ရန်ပိုမိုအားကောင်း၊ ပေါ့ပါး၊ သန့်ရှင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည်။ HelpMEHemp Inc သည်ကုန်ပစ္စည်းများပါ ၀ င်သောကုသမှုဂုဏ်သတ္တိများကိုမှန်ကန်စွာပြောပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ HelpMEHemp inc ။ ကျွန်တော်တို့ကိုအော်ဂဲနစ်သဘာဝသယံဇာတများကိုထောက်ပံ့ပေးသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချောင်းဆိုးခြင်းကျွန်ုပ်သည်အနှစ် ၂၀ တာကာလကြာရှည်ခံစားခဲ့ရသည့်နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေရန်လျှော်ရေနံကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ငါ့ကိုဘယ်သူမှကူညီမပေးနိုင်ဘူး ရေနံသည်ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေသည်။ နောက်ဆုံးမှာချောင်းဆိုးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ ငါလျှော်ရေနံကိုဆက်သောက်မယ်။ အခုထိကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။
သကြားနှင့်နာကျင်မှုလွန်ခဲ့သော ၆ လကကျွန်ုပ်သည်နယ်စပ်ဒေသဆီးချိုရောဂါဖြစ်ကြောင်း၊ ငါ့ကိုဆေးသောက်စေသည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်၊ ခဏကြာပြီးမှဆေးသောက်တော့သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ လခန့်ကသင်၏လျှော်ရေနံကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီးမျက်စိဆရာဝန်ထံသွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့သကြားမရှိဘူး၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ဆီပါ။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ဒူးကအရမ်းဆိုးပြီးဒီဆီကိုနှုတ်ဖြင့်ယူပြီးကတည်းကလုံးဝနာကျင်မှုကင်းတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏မျက်နှာကိုနှစ်သက်သော moisturizer ဖြစ်သည်
အံ့ဖွယ်အဆီဒီဆီဟာအံ့ဖွယ်ပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကစသုံးပြီးကတည်းကငါနေမကောင်းဘူး ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခံအားစနစ်တွင်ခြုံငုံ။ တိုးတက်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ဒါကသာမကကျွန်မရဲ့အရေပြားကိုလိမ်းကျံပေးခြင်းကကျွန်တော့်ကိုတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်ပေးခဲ့တယ်။ ငါချီးမွမ်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ရ! အဲဒီမှာကုတ်အင်္ကျီနှင့်အစာခြေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းကျွန်ုပ်၏ခွေးများကိုပေးသည်။ ဒါကိုဘာလို့အံ့ဖွယ်ရေနံလို့ခေါ်ရတာလဲ။ အခြားကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
နာတာရှည်နာကျင်မှုနာကျင်မှုကျွန်တော်အထက်တန်းကျောင်းနှင့်ကောလိပ်တစ်လျှောက်လုံးနပန်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးကျွန်ုပ်၏ခြေကျင်းကို ၁၀ ကြိမ်တိုင်တိုင်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုးဆုံးဒဏ်ရာကြောင့်ကျွန်တော့်ခြေကျင်းဟာစပျစ်သီးအရွယ်အရွယ်အထိရောင်လာပြီးဘယ်တော့မှလုံးဝပျောက်ကင်းသွားသည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်နာကျင်မှုတိုးများလာပြီးရောင်ရမ်းခြင်းကအမာရွတ်တစ်သျှူးသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ တခါတရံလမ်းလျှောက်နေစဉ်သို့မဟုတ်လှေကားပေါ်သို့ဆင်းသွားစဉ်ကျွန်ုပ်၏ခြေကျင်းကထွက်လာတတ်သည်။ ငါလျှော်ရေနံနှင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်မှုန်ရေမွှားကိုပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်သောအခါငါသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ နေ့စဉ်နှုတ်ဖြင့်ယူပြီးငါ့ခြေကျင်းတွင်ဆီအချို့ကိုပွတ်ပေးပါ။ ထို့နောက်မဂ္ဂနီစီယမ်မှုန်ရေမွှားကိုသောက်သုံးရန်အကြံပြုပါသည်။ ငါဒီလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်ကစခဲ့တာပါ။ နာကျင်မှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးရောင်ရမ်းခြင်းဟာ ၇၅% လောက်လျော့နည်းသွားသည်။ ကျွန်တော်ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ်။ ၁၀ နှစ်ကျော်နာကျင်မှုခံစားရပြီးနောက်အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်နှင့်အလွန်ထိရောက်မှုရှိသည်။
IV ARM နာကျင်မှုငါဆေးရုံတက်နေသည်2ပတ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးငါ့လက်မောင်းမှာအလွန်နာကျင်ကိုက်ခဲသည်။ ငါဆေးရုံကိုပြန်သွားပြီးသူတို့ကိုအရမ်းမှားပြီးနာကျင်မှုများစွာကိုပြောပြဖို့အဆင်သင့်ပဲ။ ငါနေ့စဉ်နှုတ်ဖြင့်ယူသော်လည်း Hemp ရေနံကိုသတိရ။ ငါ5မိနစ်နာကျင်မှုပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်, ငါ့လက်မောင်းမှလျှောက်ထား, ငါရေချိုးပြီးနောက်ပိုပြီးပေါ်မှာတင်ဖြစ်ကောင်းကြောင့်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယ။ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကို RA နှင့် fibromyalgia နှင့်ပြောပြရန်အတွက်ဤအရာသည်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ငါသိတယ်။
အံ့သြဖွယ်ရေနံ! ငါပထမလအနည်းငယ်အကြာကဒီကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Colleen သည်နမူနာအချို့ကိုကျွန်ုပ်နှင့်မျှဝေခဲ့ပြီးသူကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ရလဒ်များကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ ငါကလူပဲ။ ငါတစ်နေ့တစ်ဇွန်းဇွန်းကိုယူ။ ညဉ့်အခါငါ့အ moisturizer အဖြစ်ယခုအသုံးပြုသည်။ တစ်ပတ်အကြာမှာငါသုံးပတ်လောက်သုံးပြီးငါ့အသားအရေဟာတောက်ပနေသည်ဟုငါ့ကိုမတူညီတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ၃ ယောက်ပြောခဲ့တယ်။ ငါ့အသားအရေကနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသည်။ ငါ၌လစဉ်ပျော့ပျောင်းနှုန်းသာရှိသော်လည်း၎င်းသည်၎င်းအားကောင်းစွာကျဆင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၁၄ နှစ်သမီးသည်ယခုတွင်အသုံးပြုနေပြီး၎င်းသည်နဖူး၊ အရေပြားခြောက်သွေ့သောအသားအရေများကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကထွက်ပေါ်လာသည့်ထွက်ကုန်များ (သူမအသုံးပြုသောအခြားထုတ်ကုန်များရပ်တန့်သွားသည်) ကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ သူမချစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်တန်ကိုမသုံးကြဘူး၊ ငါအရေပြားအိုမင်းခြင်းအဘို့အငါ့အဘို့အလောဗန်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်စုပ်ယူပြီးလေးလံသောသို့မဟုတ်အဆီပြန်ခြင်းမရှိပေ။ ငါ PMS ကာလအတွင်းငါ့ဝမ်းကိုပွတ်နယ်စတင်ခဲ့ပြီးကြောင့်ငါ့ကြွက်တက်ဝေး! ငါစမ်းကြည့်ချင်တဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းတွေကိုငါမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဝယ်လိုက်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤရေနံကိုနှစ်သက်သည်။
ကျန်းမာသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ငါညတိုင်းရေနံသောက်သည်။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တာတွေရလာပြီဆိုတာသိလိုက်ရတော့ကျွန်မကိုစိတ်ချမ်းသာစေတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်သူအိမ်သား (၅) ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်အနာရောဂါနှစ်ခုအကြိမ်မှလွတ်မြောက်နိုင်ပါပြီ။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏လမ်းကိုမှုတ်စေသောရောဂါတိုင်းကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည်၊ သို့သော်တော့တော့မဟုတ်ပါ။ ကျွန်မသူ့ကိုသက်သာမှုရအောင်ကျွန်မခင်ပွန်းဖြစ်သူကပြန်နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာကိုး။ ကြီးမြတ်ဝယ်ယူ။
မှော် ... ငါသည်သင်တို့၏လျှော်ရေနံနှင့်အတူသတိထားမိ! ငါမနက်တိုင်းကော်ဖီထဲဇွန်းတစ်ဇွန်းထည့်လိုက်တယ်။ အဲဒါကိုတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်“ moisturizer” အဖြစ်သုံးတယ်။ စုံတွဲတစ်တွဲကိုရေတစ်ခွက်လောက်ငါရေလောင်းပေးတယ်။ ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးက LOVE !! မျက်လုံးပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးသော rollerball တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် - မင်းရဲ့လျှော်ဆီဟာငါ့အခြေအနေ၊ yarrow / pom, geranium နှင့် frankincense မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ။ အသားအရေချောမွေ့ပြီးကျီးကန်းများနည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အချစ်
ရင်းနှီးစွာ KETO !!!!!! ငါအဆီဗုံးတွေအားလုံးဆီကိုကောင်းကောင်းရှာဖွေခဲ့တယ်။ Dondonde ငါ့ကိုတစ်နေ့ရေနံချောင်းကငါရေတွင်းထဲကို ၀ င်ကြည့်တဲ့အဆီပါ။ အခုအာဟာရပြည့်ဝတဲ့ဘဝပုံစံနဲ့ကိုက်ညီပြီးလုံးဝကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စင်ကြယ်တဲ့ဆီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ ketosis! ကျောက်တုံးတစ်တုံးဖြင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်ခြင်းသည်အလွန်အံ့သြစရာပါတကား!
တစ်ခုမှာ "LIT" ထုတ်ကုန်! ငါသည်ငါ့အသားအရေနှင့် GI လမ်းကြောင်းအတွက်အရွယ်ရောက်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဘာပြောနိုင်သနည်း၊ ငါ့ ၁၁ နှစ်အရွယ်သည်ညအချိန်တွင်အိပ်စက်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဘယ်အချိန်မှာ ၁၁ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်မှာသတိရတာကသူမကအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်။ ၎င်းသည် LIT ထုတ်ကုန်တစ်ခုထက် ပို၍ ပြောရန်လိုအပ်ပါသလား။
Healthy Path - ဒီဆီကိုချစ်ပါအသက်အရွယ်ကိုခြိမ်းခြောက်သောရောဂါရှိသည့်ကလေးတစ်ယောက်ရှိခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှု၊ ကြောက်စိတ်နှင့်ကြေကွဲဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုခံစားခဲ့ရပြီးနေ့စဉ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်သားဟာအခုချိန်မှာတည်ငြိမ်နေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရတော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ကံကောင်းတာကကျွန်ုပ်သည်မိသားစု ၀ င်များက Help Me Hemp အကြောင်းရေးသားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ငါကျန်းမာစွာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြားနားအောင်သတိပြုမိသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ဤလျှော်သောရေနံကိုကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ငါခံစားမိပုံနှင့်မတူကွဲပြားသောခြားနားချက်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည် - ကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်မှုတည်ငြိမ်လာပြီးကျွန်ုပ်၏တုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုလျော့နည်းသွားပြီးကျွန်ုပ်၏အသားအရေ (ကောင်းတဲ့ဆုကြေးအဖြစ်) အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ငါသည်လည်းငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း၏ဤလမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်လက်ပါလိမ့်မည်နှင့်အတူငါ Help Me Hemp (အထူးသဖြင့်ဒီရေနံ!) မှထုတ်ကုန်အများအပြားဆက်လက်သုံးစွဲလိမ့်မည်!
အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရေနံဤပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်ချောချောမွေ့မွေ့အတွက်သာမကဘဲကျွန်ုပ်၏ခွေးနေ့စဉ်အတွက်လည်းအသုံးပြုပါသည်။ ငါတို့မိသားစုကဒီဆီကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဘာမှမရောထွေးနိုင်ဘူး။ :)
Love သည်ဤထုတ်ကုန်ကိုဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှရရှိပြီး၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ မင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင့်မိသားစုသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးသည်ကိုယ်အလေးချိန်၊ အရေပြားခြောက်သွေ့မှုမဖြစ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံအချို့ရှိခဲ့ပြီးမကြာသေးမီကသူလုံးဝအစာမစားတော့ပါ။ ငါတို့အရမ်းစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးветеринарияကိုခေါ်သွားတယ်။ စစ်ဆေးမှုများနှင့်နောက်ဆက်တွဲအကြီးအကျယ်ဥပဒေကြမ်းပြီးနောက်၎င်းတို့ပြောသောစကားမှာ "ငါတို့ဘာမှားနေတယ်ဆိုတာငါတို့မသိဘူး" ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့ခွေးတွေကိုစားဖို့သူသွေးဆောင်နေချိန်မှာမင်းရဲ့ခွေးတွေဆီဆီထည့်တာကသူတို့စားတာ၊ သူတို့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီစတာတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဆိုတာငါတို့ကြားခဲ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲ။ တစ်ပါတ်အကြာတွင်ပုံမှန်စားသည်။ တစ်လခွဲခွဲကြာပြီးတဲ့နောက်သူ့အရေပြားအစက်တွေဟာမရှိတော့ပါဘူး။ ယခုသူသည်ကျန်းမာသောကိုယ်အလေးချိန်ရှိသည်။ VET တောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုဘာလုပ်ပေးလဲလို့မေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါပြောရမယ်၊ ငါအရမ်းဝမ်းသာတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမှားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတဲ့အချိန်မှာဘဲငါဟာအဖိုးတန်ခွေးကလေးကိုဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့မတင်စရာမလိုဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုကူညီ Hemp! ငါမကြာသေးမီကမျက်စိနာကျင်မှုအတွက်ငါ့မျက်စိဆရာဝန်ထံသို့သွားပြီးလျှင်, ကျယ်ပြန့်စာမေးပွဲအပြီးသူမကကျွန်မမှာပြင်းထန်ခြောက်သွေ့သောမျက်စိရှိခဲ့သူဆုံးဖြတ်သည်။ သူကကူညီပေးခဲ့ပေမယ့် ၁၀၀ ရာနှုန်းမပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နံနက်ခင်းဖျော်ရည်တွင် Help Me Hemp လျှော်ဆီကိုထည့်ပြီးပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုခံစားရသည်။ ငါမျက်လုံးတစ်စက်ကိုရပ်လိုက်ပြီးညဘက်မှာသာသုံးသည်။ ငါသည်လည်းတစ်ပတ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်သုတ်သုတ်အစေ့အချို့ကိုဖြန်းပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အစာခြေပြproblemsနာများအတွက်လည်းအမှန်တကယ်ကူညီခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုကူညီကျေးဇူးတင် !! Lime Body Butter ကိုကြိုးစားရန်မစောင့်နိုင်တော့ပါ။ !!
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အာဟာရအတွက်အဓိကကျွနုပ်တို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များစွာမှရလဒ်ကောင်းများရရှိခဲ့သည်။ သင်၏လျှော်ရေနံနှင့်လျှော်စေ့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အာဟာရအတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ ငါသည်ငါ့ချက်ပြုတ်နည်းများအများအပြားနှင့်ငါ့အသားအရေနှင့်ငါ့ညစဉ်ညတိုင်းတပ်ရင်းအတွက်အစားထိုးအဆီအဖြစ်လျှော်ရေနံကိုအသုံးပြုပါ။ လျှော်မျိုးစေ့များသည်သဘာဝအားဖြင့်အများအားဖြင့်ပျော်မွေ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏နံနက်ကော်ဖီနှင့်အတူငါ၏စားစရာခန်းအော်ဂဲနစ် granola နှင့်လျှော်နို့ကိုထိမှန်သည်။ သင်၏ Lime Body Butter သည်မိသားစုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ အထက်ပါထုတ်ကုန်များနှင့်ပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်၏အစာခြေခြင်းပြwithနာများ (ကျွန်ုပ်သည်ယခုစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားခြင်း) နှင့်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အရေပြားသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်၏သား၏နှင်းခူသည်ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ Myorski မိသားစုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မ ၀ င်စားသေးဘူး။ အဲဒါအမှန်ပါပဲ! ငါ့သမီးတွင်သူမ၏ ဦး ရေပြားတွင်ပြင်းထန်သော psoriasis ရှိသည်။ ကျနော်တို့မျိုးစုံကုစားကြိုးစားခဲ့ပါတယ်; မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၊ ဈေးကြီးသော shampoos နှင့် hydrocortisone လိမ်းဆေးများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်သည်။ သူမ Help Me Hemp ဆီမှ ၀ ယ်ယူထားသောအော်ဂဲနစ်လျှော်ရေနံကိုသူကြိုးစားရှာဖွေခဲ့ပြီးသူသည် psoriasis အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်ကိုတွေ့ရသောအခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်၏ post ကိုကျွန်မတွေ့လိုက်ရသည်။ ငါအိပ်ရာမဝင်မီငါ့သမီး ဦး ရေပြားကိုအင်္ကျီတစ်ထည်တင်လိုက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်မှာသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ အနီရောင်၊ ယားယံခြင်းနှင့်ယားယံခြင်းနှင့်အလွှာပါးခြင်းတို့သည်တစ်ညလုံးတွင်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး။